Welcome to EzyYay
The Water Delivery Master Solution
Wherever you are, whenever it is,
water order delivery made EASY.
Transforming the water delivery industry!
EzyYay has transformed the water delivery industry with instant access to customer locations, sales orders, payments and delivery routes made by delivery masters. Taking order and delivery of water will no longer be the same with EzyYay!
EzyYay မှ ရေသန့်ပို့ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအား customer ၏တည်နေရာများ၊ ရောင်းချမှုအမှာစာများ၊ ငွေပေးချေမှုများနှင့် ကျွမ်းကျင်သောပို့ဆောင်သူများ၏ သတ်မှတ်ထားသော ပို့ဆောင်ရန်လမ်းကြောင်းများကို အရံသင့်လက်ခံရယူမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်သည်။ အမှာစာနှင့်ရေသန့်ပို့ဆောင်မှုသည် EzyYay ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ထူးခြားသွားသည်။
EzyYay မှ ရသေနျ့ပို့ဆောငျမှုလုပျငနျးအား customer ၏တညျနရောမြား၊ ရောငျးခမြှုအမှာစာမြား၊ ငှပေေးခမြှေုမြားနှငျ့ ကြှမျးကငျြသောပို့ဆောငျသူမြား၏ သတျမှတျထားသော ပို့ဆောငျရနျလမျးကွောငျးမြားကို အရံသငျ့လကျခံရယူမှုအဖွဈ ပွောငျးလဲလိုကျသညျ။ အမှာစာနှငျ့ရသေနျ့ပို့ဆောငျမှုသညျ EzyYayကိုအသုံးပွုခွငျးဖွငျ့ ထူးခွားသှားသညျ။
Been looking for an app to solve your water delivery problems? EzyYay is the App you need. Our easy-to-use mobile app platform can do just about anything, and allows you to track and monitor all deliveries viaasmartphone on your hand. EzyYay is the App for you and can be used from anywhere at anytime!
ရေသန့်ပို့ဆောင်မှုပြဿနာများအတွက် appတစ်ခုကိုရှာဖွေနေပါသလား? သင့်အတွက်လိုအပ်နေသောAppကတော့ EzyYayပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သော mobile appသည် အရာအားလုံးအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်သာမက သင့်၏လက်ထဲမှ smartphoneတစ်လုံးဖြင့် ပို့ဆောင်မှုများကိုစောင့်ကြည့်၍ ခြေရာကောက်နိုင်သည်။
ရသေနျ့ပို့ဆောငျမှုပွဿနာမြားအတှကျ appတဈခုကိုရှာဖှနေပေါသလား? သငျ့အတှကျလိုအပျနသေောAppကတော့ EzyYayပဲဖွဈပါတယျ။ ကြှနျုပျတို့ရဲ့အလှယျတကူအသုံးပွုနိုငျသော mobile appသညျ အရာအားလုံးအတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျသာမက သငျ့၏လကျထဲမှ smartphoneတဈလုံးဖွငျ့ ပို့ဆောငျမှုမြားကိုစောငျ့ကွညျ့၍ ခွရောကောကျနိုငျသညျ။
Delivery by Routes
EzyYay allows unlimited route configuration and delivery masters will be able to easily select routes to make delivery trips to their customers. All routes, delivery and trip records are conveniently accessible from the EzyYay mobile app. All deliveries are guided by GPS positioning and Google Maps to assist the delivery masters in making efficient deliveries and sales.
EzyYayသည် လမ်းကြောင်းအစီအစဉ်စနစ်ကို အကန့်အသတ်မရှိလုပ်နိုင်ပြီး ကျွမ်းကျင်သောပို့ဆောင်သူများသည် customerများထံသို့ ပို့ဆောင်ရန်လမ်းကြောင်းများအား အလွယ်တကူရွေးချယ်နိုင်လိမ့်မည်။ လမ်းကြောင်းများအားလုံး၊ ပို့ဆောင်မှုနှင့် ပို့ဆောင်ခဲ့သောခရီးစဉ်များအား EzyYay mobile appဖြင့် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာရယူနိုင်သည်။ ပို့ဆောင်မှုအားလုံးသည် GPSတည်နေရာများဖြင့်လမ်းညွှန်ထားပြီး ကျွမ်းကျင်သောပို့ဆောင်သူများ၏ ထိရောက်သောပို့ဆောင်မှုနှင့် ရောင်းချမှုများအား Google Mapsဖြင့် ထောက်ပံ့ကူညီပေးထားသည်။
EzyYayသညျ လမျးကွောငျးအစီအစဉျစနဈကို အကနျ့အသတျမရှိလုပျနိုငျပွီး ကြှမျးကငျြသောပို့ဆောငျသူမြားသညျ customerမြားထံသို့ ပို့ဆောငျရနျလမျးကွောငျးမြားအား အလှယျတကူရှေးခယျြနိုငျလိမျ့မညျ။ လမျးကွောငျးမြားအားလုံး၊ ပို့ဆောငျမှုနှငျ့ ပို့ဆောငျခဲ့သောခရီးစဉျမြားအား EzyYay mobile appဖွငျ့ အဆငျပွခြေောမှစှေ့ာရယူနိုငျသညျ။ ပို့ဆောငျမှုအားလုံးသညျ GPSတညျနရောမြားဖွငျ့လမျးညှနျထားပွီး ကြှမျးကငျြသောပို့ဆောငျသူမြား၏ ထိရောကျသောပို့ဆောငျမှုနှငျ့ ရောငျးခမြှုမြားအား Google Mapsဖွငျ့ ထောကျပံ့ကူညီပေးထားသညျ။
EzyYay allows you to record adhoc sales of water to customer via the intuitive and comprehensive adhoc sales module. You can configure EzyYay to handle different sizes of water bottles sold with different prices.
EzyYayသည် သင့်အားcustomerများထံ ရေသန့်ရောင်းချမှုများကို အလိုလိုသိပြီး ပြည့်စုံသောရောင်းချမှုစနစ်ဖြင့် မှတ်သားထားနိုင်စေသည်။ သင်သည် EzyYayဖြင့် ကွဲပြားခြားနားသည့်ရေသန့်ဗူးအရွယ်အစားများအား မတူညီသောဈေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချခဲ့သည့်စာရင်းများကို စီစဉ်ထားနိုင်သည်။
EzyYayသညျ သငျ့အားcustomerမြားထံ ရသေနျ့ရောငျးခမြှုမြားကို အလိုလိုသိပွီး ပွညျ့စုံသောရောငျးခမြှုစနဈဖွငျ့ မှတျသားထားနိုငျစသေညျ။ သငျသညျ EzyYayဖွငျ့ ကှဲပွားခွားနားသညျ့ရသေနျ့ဗူးအရှယျအစားမြားအား မတူညီသောစြေးနှုနျးဖွငျ့ ရောငျးခခြဲ့သညျ့စာရငျးမြားကို စီစဉျထားနိုငျသညျ။
All delivery trips made via EzyYay are consolidated and tracked daily. The total sales, delivery and payments received for every trip made by the delivery masters can be easily retrieved via EzyYay mobile app.
ပို့ဆောင်မှုခရီးစဉ်များအားလုံးအား EzyYayဖြင့်နေ့စဉ်ပေါင်းစည်း၍ ခြေရာကောက်ထားသည်။ စုစုပေါင်းရောင်းချမှုများ၊ ပို့ဆောင်မှုနှင့် ကျွမ်းကျင်သောပို့ဆောင်သူများ၏ခရီးစဉ်တိုင်းမှ ငွေပေးချေမှုဖြင့် လက်ခံရရှိခြင်းများကို EzyYay mobile appဖြင့် အလွယ်တကူရယူနိုင်သည်။
ပို့ဆောငျမှုခရီးစဉျမြားအားလုံးအား EzyYayဖွငျ့နစေ့ဉျပေါငျးစညျး၍ ခွရောကောကျထားသညျ။ စုစုပေါငျးရောငျးခမြှုမြား၊ ပို့ဆောငျမှုနှငျ့ ကြှမျးကငျြသောပို့ဆောငျသူမြား၏ခရီးစဉျတိုငျးမှ ငှပေေးခမြှေုဖွငျ့ လကျခံရရှိခွငျးမြားကို EzyYay mobile appဖွငျ့ အလှယျတကူရယူနိုငျသညျ။
၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း လွယ်ကူမှု
၁၀၀ ရာခိုငျနှုနျး လှယျကူမှု
EzyYay isa100% mobile solution. No need to get desktop computers or laptops! Carry out all deliveries and track all activities from your smartphone!
EzyYayသည် ၁ဝဝရာခိုင်နှုန်းmobileဖြစ်သည်။ Desktop computer သို့မဟုတ် laptopများ အသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပေ။ ပို့ဆောင်မှုများနှင့် ခြေရာကောက်သောလှုပ်ရှားမှုများအားလုံးကို သင့်၏smartphoneဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
EzyYayသညျ ၁ဝဝရာခိုငျနှုနျးmobileဖွဈသညျ။ Desktop computer သို့မဟုတျ laptopမြား အသုံးပွုရနျမလိုအပျပေ။ ပို့ဆောငျမှုမြားနှငျ့ ခွရောကောကျသောလှုပျရှားမှုမြားအားလုံးကို သငျ့၏smartphoneဖွငျ့ လုပျဆောငျနိုငျသညျ။
How good and different is EzyYay from other similar mobile apps in the market?
EzyYayက ဈေးကွက်မှာရှိသော အခြားအလားတူmobile appတွေနဲ့ ဘယ်လိုများကောင်းမွန်ပြီး ကွဲပြားပါသလဲ?
EzyYayက စြေးကှကျမှာရှိသော အခွားအလားတူmobile appတှနေဲ့ ဘယျလိုမြားကောငျးမှနျပွီး ကှဲပွားပါသလဲ?
There is no match because there is no mobile app in the market that does what EzyYay does! And no app and team works and understands the purified water industry better than the EzyYay Team!
အလားတူမရှိပါ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် EzyYayကဲ့သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သော mobile appမျိုး ဈေးကွက်မှာမရှိပါဘူး။ ထို့အပြင် အလားတူapp၊ အလားတူအစုဖွဲ့လုပ်ဆောင်မှုစိတ်ဓာတ်များနှင့် EzyYay Teamထက်ပို၍ ရေသန့်လုပ်ငန်းကိုကျွမ်းကျင်စွာ နားလည်ထားခြင်းများလည်း မရှိပါဘူး။
အလားတူမရှိပါ အဘယျ့ကွောငျ့ဆိုသျော EzyYayကဲ့သို့လုပျဆောငျနိုငျသော mobile appမြိုး စြေးကှကျမှာမရှိပါဘူး။ ထို့အပွငျ အလားတူapp၊ အလားတူအစုဖှဲ့လုပျဆောငျမှုစိတျဓာတျမြားနှငျ့ EzyYay Teamထကျပို၍ ရသေနျ့လုပျငနျးကိုကြှမျးကငျြစှာ နားလညျထားခွငျးမြားလညျး မရှိပါဘူး။
Do I need to host my own servers to use EzyYay?
No need for that! EzyYay Team handles everything about hosting and backend infrastructure. Just download, install and use EzyYay!
မလိုအပ်ပါ။ EzyYay Teamမှ hostingနှင့်backendတည်ဆောက်မှုအရာအားလုံးကို ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်ပေးပါမည်။ EzyYayကို အသုံးပြုရန် download၍installလုပ်ရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။
မလိုအပျပါ။ EzyYay Teamမှ hostingနှငျ့backendတညျဆောကျမှုအရာအားလုံးကို ကိုငျတှယျလုပျဆောငျပေးပါမညျ။ EzyYayကို အသုံးပွုရနျ download၍installလုပျရနျသာ လိုအပျပါသညျ။
Will there be training provided to train on the use of EzyYay?
Yes, EzyYay subscription package comes withatraining session to guide you on all functionalities of EzyYay. Refresher training can be provided upon request withanominal service fee.
ရှိပါတယ်။ EzyYay subscription packageတွင် အစမ်းပြလေ့ကျင့်ပေးခြင်းပါဝင်ပြီး EzyYay၏လက်တွေ့အသုံးဝင်မှုများကိုလည်း လမ်းညွှန်ပြသပေးပါမည်။ ကနဦးလေ့ကျင့်မှုအား မဆိုသလောက်ဝန်ဆောင်ခဖြင့် ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
ရှိပါတယျ။ EzyYay subscription packageတှငျ အစမျးပွလကေ့ငျြ့ပေးခွငျးပါဝငျပွီး EzyYay၏လကျတှအေ့သုံးဝငျမှုမြားကိုလညျး လမျးညှနျပွသပေးပါမညျ။ ကနဦးလကေ့ငျြ့မှုအား မဆိုသလောကျဝနျဆောငျခဖွငျ့ ပွုလုပျပေးပါသညျ။
EzyYay will be constantly updated and you will be informed about the latest updates available via the EzyYay mobile app, email or phone notification.
EzyYayသည် အရံသင့်ပြုပြင်မွမ်းမံပြီး EzyYay mobile app၊ အီးမေးလ် သို့မဟုတ်ဖုန်းဖြင့် နောက်ဆုံuးpdateများအကြောင်းကို သင့်ထံအကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။
EzyYayသညျ အရံသငျ့ပွုပွငျမှမျးမံပွီး EzyYay mobile app၊ အီးမေးလျ သို့မဟုတျဖုနျးဖွငျ့ နောကျဆုံuးpdateမြားအကွောငျးကို သငျ့ထံအကွောငျးကွားမညျဖွဈပါသညျ။
EzyYay Launch @ Yangon, covered by Media TOP 4! #EzyYay #CappsSolutions #DeliveryMasterSolution #BigBoss
Posted by EzyYay on Monday, 29 July 2019
EzyYay on Tatmadaw Local News! #EzyYay #cappssolutions #DeliveryMasterSolution
Posted by EzyYay on Thursday, 11 July 2019
EzyYay on Media Top 4! 😄 #EzyYay #cappssolutions #DeliveryMasterSolution
EzyYay media brief in Yangon with Myanmar Purified Water Association Chairman U Ye Htut! #EzyYay #cappsssolutions #DeliveryMasterSolution #BigBossWaterSolution
Posted by EzyYay on Tuesday,9July 2019
EzyYay Client Training in M3 in Yangon
Product Launch in Central Hotel in Yangon
EzyYay Launch in Yangon with Guest Of Honor, Chairman of Association of Purified Water, supporting the adoption of technology in the industry.
Room No. 3, 369 Complex, Lay Daungkan Rd
+9597676 7979 7
Another Product Solution from www.capps.com.sg
© 2022 CAPPS SOLUTIONS MYANMAR PTE LTD